Guddoomiyaha Mandera oo soo dhaweeyay mashruuc dhanka waddooyinka oo laga fulinaya waqooyi bari – Radio Damal
Guddoomiyaha Mandera oo soo dhaweeyay mashruuc dhanka waddooyinka oo laga fulinaya waqooyi bari
Barasaabka ismaamulka Mandera ahna guddoomiyaha daladda ay ku mideysan yihiin ismaamullada xoolo dhaqatada ee FCDC,Cali Ibraahim Roba ayaa soo dhaweeyay mashruuc ay si wadajir ah u fulinayaan dowladda Kenya iyo bangiga adduunka .
Mashruucan oo lagu xoojinaya kaabayaasha waddooyinka ayaa laga hirgelinayaa gobolka waqooyi bari.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twittarka ayuu Cali Roba ugu mahadceliyay madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta iyo bangiga adduunka.
Waxaa uu xusay in ugu dambeyn lagu baraarugay mashruuca keliya uguna muhiimsan horumarinta nolosha shacabka waqooyi bari.
Daladda uu Cali Roba guddoomiyaha ka yahay ee FCDC ayaa dhankeeda sheegtay in fulinta mashruucan ay war lagu farxo u tahay sido kalena rajo ku beeraysa dadweynaha ku nool gobolka.
Guddiga agaasimayaasha bangiga adduunka ayaa shalay ansaxiyay in ururka caalamiga ee horumarka ee IDA uu lacag dhan 750 milyan oo doolar ku qarash geliyo wanaajinta isku socodka dadweynaha, badeecooyinka ,isku xirka dhanka dijitaalka iyo helidda adeegyada bulshada ee waqooyi bari.Mashruucan waxaa ka faa’iidaysanaya in ka badan 3.2 milyan oo qof.
Iyadoo loo maraya mashruuca horumarinta geeska Afrika ee (HoAGDP) ayuu bangiga adduunka maalgelinayaa in dayactir lagu sameeyo 365 kiilomitir oo ka mid ah waddada uu dheerarkeedu yahay 740-kiilomitir ee marinka Isiolo-Mandera Regional Road Corridor iyo 30 kiilomitir oo ah waddooyinka yaryar.Waddooyinka kale ayaa waxaa heer sare gaarsiin doono hay’adaha kale ee horumarka.Sido kale mashruuca HoAGDP ayaa waddada ah 740-ka kiilomitir ka sameyn doono xiriirin dhanka intarneetka ah.
Waxaa qorshaha qayb ka ah in gacan laga gaysto tallaabooyinka lagu fududeeyo ganacsiga , dhismaha saldhigyada lagu xoojiyo amniga xuduudda , hannaanka maareynta xuduudaha , in dadweynaha gobolka ay helaan kaabayaasha dhaqaale iyo bulsho, xoojinta maamullada iyo ka falcelinta xaaladaha degdegga ah sida musiibooyinka .
Josphat Sasia oo ku takhasusay arrimaha gaadiidka ayaa sheegay in aan si buuxda looga faa’iidaysan awooda gobolka waqooyi bari uu u leeyahay fududeynta howlaha ganacsiga ee geeska Afrika.
Waxaa uu intaa ku daray in dhaqangelinta mashruucan ay meesha ka saari doonto in gobolka uunan qaybaha kale ee wadanka kala siinayn dhanka horumarka , tani oo muddo dheer soo jirtay.
Mr. Josphat ayaa carrabka ku adkeeyay in si loogu guulaysto fulinta mashruucan muhiimka ah loo baahan yahay inay taageeraan bulshada iyo hoggaamiyaasha waqooyi bari.